Mobile mentkwụ Hackgwọ Hacks maka Business | Martech Zone
Mobile mentkwụ Hackgwọ Hacks maka Business
Tuesday, May 13, 2014 Monday, May 12, 2014 Douglas Karr
Azụmaahịa gị ọ na-enye nhọrọ ịkwụ ụgwọ ekwentị? Dika oru ugwo na teknụzụ mkpanaka di ebe nile, ohere igbanwe olile anya n'ime onye ahia site na ugwo ugwo nke ekwenti kwesiri idi na radar gi!
Nkwụnye ụgwọ nke ekwentị bụ n'ụzọ doro anya teknụzụ na-ewu ewu maka azụmaahịa niile. Na 2012 enwere $ 12.8 na azụmahịa mkpanaka na US, site na 2017 ọnụọgụ ahụ ga-abụ $ 90 ijeri. Nke ahụ bụ 48% na-eto eto kwa afọ karịa afọ ise! Ma naanị 66% nke obere azụmaahịa na-eji ụdị teknụzụ ekwentị ọ bụla, ma hapụ naanị teknụzụ ịkwụ ụgwọ ekwentị. Agagharị agagharị
Achọpụtara m na m na-akwụ ụgwọ ụgwọ ekwentị m, mkpuchi, ịnya ịnyịnya ma ọbụlagodi ịkwụ ụgwọ n'okporo ámá m na-adọba ụgbọala site na ngwa mkpanaka na nhọrọ ịkwụ ụgwọ ekwentị. Na Satọdee m gara nchịkọta ego ebe ọnụahịa dị jụụ mezuru kpamkpam site na iji ozi ederede na ihe ọ bụla ọzọ!
Enwere ihe atụ na azụmahịa ọ bụla - n'etiti mkpebi ịzụta na ezigbo ịzụta - ebe ọtụtụ atụmanya hapụrụ. Paymentskwụ ụgwọ ekwentị nwere ike ịbụ ihe ga-enyere gị aka ịkwụsị ọnwụ ndị ahụ.
Tags: Dwollalevelupnnabata ugwo mobilenche ịkwụ ụgwọ ekwentịugwo ugwokpokọtarana nso nso nkwukọrịtanfcekwentịKoodu QRsquareüber
Nchịkọta Google: Nchịkọta Ọdịnaya maka Nnyocha Ọdịnaya Ọdịnaya